နိုင်ငံရေး | Published | ShweHub brought to you by ShweRoom
Investigating Rapid Advice For Gboxapp Presentations - Powered By PHPFox
By seymourhe 2862 days ago on နိုင်ငံရေး from friendsmob.com
Investigating Rapid Advice For Gboxapp Presentations.
A ton of app evaluation internet sites (like this one!) will operate giveaways and promotions of promo codes by their site, their Twitter account, their Facebook enthusiast webpages, and other social networking chances.
By jackiekyaw 2937 days ago on နိုင်ငံရေး from news.yatanarpon.com.mm
မိမိတာဝန်ကို ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှုရှိရှိ မှန်မှန်ကန်ကန် ထမ်းဆောင်သူများ အနေနှင့် သတင်းမီဒီယာများကို ကြောက်စရာ မလိုကြောင်း ဝန်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံ လမ်းညွှန်မှာကြားသည့် အခါတိုင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားလေ့ရှိသည်ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ၎င်း၏ လယ်တောအိမ်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) နှင့် ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခန့်က တွေ့ဆုံစဉ် ပြောကြားသည်။သမ္မတနှင့် သီးသန့်တွေ့ဆုံစဉ် သတင်းမီဒီယာများ အနေနှင့် သတင်းကိစ္စများအတွက် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများရှိ ဌာနအသီးသီးနှင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းသည့် အခါတိုင်း တာဝန်ခံ ဖြေကြားသူ မရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီ (ယာယီ) ၏ တင်ပြဆွေးနွေးချက်ကို သမ္မတက
နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပထမဆုံးအကြိမ် တံခါးပိတ် ဆွေးနွေး
By nyomyint 2937 days ago on နိုင်ငံရေး from news.yatanarpon.com.mm
နိုင်ငံရေးနှင့် စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ထပ်မံလုပ်ဆောင်မည်ဟုကြွေးကြော်ထားသော နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် သီးသန့် ဆွေးနွေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း NLD ပါတီ၏ နေပြည်တော် ပြန်ကြားရေး တာဝန်ခံ ဦးဝင်းမြင့်က ပြောကြားသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ ညနေ ၃ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လယ်တော အိမ်ရာတွင် ၎င်းတို့ နှစ်ဦးတည်း သီးသန့်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။“သူတို့နှစ်ဦးတည်း ဆွေးနွေးတာပါ။ တခြားဘယ်သ
ကိုမြအေး၏ အပြာရောင် သက္ကရာဇ် ညတေးစီးရီးကို အကျဉ်းသား ဝတ်စုံများဖြင့် ဒါရိုက်တာ နိုဘာက စတင် ရိုက်ကူး
By jasmineaye 2943 days ago on နိုင်ငံရေး from news.yatanarpon.com.mm
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဘဝတွင် အကျဉ်းထောင်ထဲ၌ ရေးသားခဲ့သော သီချင်း (၁၀) ပုဒ် အပါအဝင် သီချင်း (၁၁) ပုဒ်ဖြင့် စီစဉ်ထားသော အပြာရောင် သက္ကရာဇ်ည တေးစီးရီးကို ယခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ လဆန်းတွင် ဒီဗီဒီ ကာရာအိုကေဖြင့် ထုတ်ဝေ ဖြန့်ချိသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်လုပ်သူ တစ်ကိုယ်တော် တေးရေးဆရာ ကိုမြအေးက ပြောသည်။"အဓိကကတော့ ဝါသနာကို အခြေခံပြီး အားလပ်တဲ့အချိန်မှာ အကောင်အထည် ဖော်သွားမယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ရင်းနဲ့ အခုလို စီးရီးထုတ်ဖို့အထိ စီစဉ်ဖြစ်သွားတာပါ" ဟု (၈၈) မျိုးဆက်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်း လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ကိုမြအေးက ပြောသည်။ "နိုင်ငံရေး သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီနေ့ ထောင်သီချင်း နှစ်ပုဒ်ထဲက အပြာရောင်ည သက္ကရာဇ်ဆိုတဲ့ သီချင
ပြည်လုံးကျွတ် အပစ်ရပ် လက်မှတ်ထိုးနိုင်မှသာ နိုင်ငံရေး တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း MPC ဆို
By htainlin 2943 days ago on နိုင်ငံရေး from news.yatanarpon.com.mm
အဆိုပါ အလွတ်သဘော တွေ့ဆုံပွဲကို RCSS မှ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုင်းလနှင့် ဗိုလ်မှူး စိုင်းလောင်ဆိုင်တို့ ၂ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး MPC မှ ဦးလှမောင်ရွှေ၊ ဦးအောင်နိုင်ဦးနှင့် ဒေါက်တာ မင်းဇော်ဦးတို့က လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် လုပ်ငန်း အထောက်အကူပြု အဖွဲ့များ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်းသည် MPC ၏ အလုပ်ဖြစ်ပြီး အနာဂတ်ကို ရှေ့ဆက်သွားရမည့် ကိစ္စရပ်များ ဖြစ်ကြောင်း ဦးလှမောင်ရွှေက ဆိုသည်။"မနေ့က နိုင်ငံတော် သမ္မတ လမ်းညွှန်ပြောကြားချက်အထဲမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တာ ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ပဲ သူတို့နဲ့ ပြန်ညှိနှုန်းမှုတွေ ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ RCSS ဘက်က ပြီးခဲ့တဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတုန်းက ပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေ ဖြစ်တဲ့ တပ်ဆုတ်တ
By jackiekyaw 2948 days ago on နိုင်ငံရေး from www.thithtoolwin.com
တွေ့ရတဲ့အတွက် ဒါကို ကျနော် ကြိုဆိုပါတယ်။ အဲဒီလို ဆန္ဒပြနေကြတဲ့အချိန် ကျနော့်ကားပေါ်ကဆင်းပြီး ဆန္ဒပြနေတဲ့ အမျိုးသမီးတဦးနဲ့ စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အမျိုးသမီးက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေကြောင့် သူတို့ ရခိုင် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအနေနဲ့ ဘယ်လောက်အထိ အတိဒုက္ခ ရောက်ကြ ရကြောင်း၊ စိုးရိမ်သောက ဖြစ်ရကြောင်းကို ခံစားချက် ပြင်းပြစွာနဲ့ ကျနော့်ကို ပြောပြခဲ့ပါတယ
သူ့ကို လုံခြုံရေး မပေးဘူးလို့ ကင်တားနားပြော
မြန်မာနိုင်ငံကနေ ပြန်လည် ထွက်ခွာမသွားခင် ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ မစ္စတာကင်တားနားက အခုလို ပြောသွားတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်း မိတ္ထီလာမြို့ကို သွားရောက်စဉ်မှာ မစ္စတာ ကင်တားနား စီးလာတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ကို လူနှစ်ရာလောက် ဝိုင်းထားပြီး မော်တော်ကားကို ထုနှက် အော်ဟစ် ဆဲဆိုတာတွေ ရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မိတ္ထီလာမြို့မှာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လတုန်းက မြို့ခံ ဗုဒ္ဒဘာသာဝင်တွေနဲ့ မွတ်ဆလင်အကြား အကြမ်းဖက် ထိပ်တိုက် ရင်ဆိုင်မှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပြီး အနည်းဆုံး လူ၄၀လောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
မစ္စတာ ကင်တားနားဟာ သူ့ရဲ့ ၁၁ရက်ကြာ ခရီးစဉ် အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်နဲ့ မြန်မာ
မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး မတည်ငြိမ်မှုများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြင့်တက်မည့် အန္တရာယ်
By marlarnyein 2950 days ago on နိုင်ငံရေး from www.first-11.com
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း မွတ်စလင်တို့အပေါ် တိုက်ခိုက်မှုများသည် "ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်နှင့် စနစ်တကျ" ဖြစ်နေကြောင်း Physicians for Human Rights အဖွဲ့က ဖော်ပြခဲ့သည်။ အမေရိကန် အခြေစိုက် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်စလင်တို့အပေါ် တိုက်ခိုက်သည့် အခြေအနေသည် လတ်တလောတွင် တည်ငြိမ်နေသည်ဟု ထင်ရဖွယ်ရှိကြောင်း၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ မျှတစွာဆောင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ခဲ့မှုနှင့် ပဋိပက္ခ၏ အကြောင်းရင်းများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ပျက်ကွက်မှုတို့ကြောင့် ပဋိပက္ခများ ထပ်မံဖြစ်ပွားလာနိုင်သည့် အန္တရာယ်ရှိနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေးနှင့် မဏ္ဍိုင်သုံးခုတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ခွင့်
By nyomyint 2949 days ago on နိုင်ငံရေး from www.first-11.com
"မြန်မာနိုင်ငံမှာက gender inequality က မပျောက်သေးဘူး။ ဒီအချက်တွေ ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင် မဏ္ဍိုင်သုံးခု ရဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံက gender equality ရှိမှ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုလည်း ပိုမြင့်လာမယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို ဥာဏ်ရည်မြင့်တဲ့ နေရာမှာ လုပ်နိုင်အောင်အားပေးဖို့ လိုတယ်။ ကမ္ဘာမှာ ဆိုရင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ အထဲမှာ မိခင်တွေနဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာက လမ်းပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ မလုံခြုံတဲ့ မိန်းကလေးတွေ အများကြီး ရှိနေတယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ အမွေဆက်ခံမှု ဘယ်လိုရှိလဲ ဆိုတာကို သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်" ဟု ဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်က ပြောကြားသည်။
ဖက်ဒရယ်အခြေပြု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ် မူကြမ်းရေးဆွဲရာ၌ အခန်းတစ်ခန်းချင်းစီအလိုက် ပြည်သူလူထု၏ ဆန္ဒကို အခြေခံမည်ဟု UNFC ပြောကြား
တိုင်းရင်းသား တပ်ပေါင်းစု UNFC တွင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် (၁၁)ဖွဲ့ ပါဝင်ပြီး ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (UNA) သည် ၁၉၉၀ ပြည့် ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ တိုင်းရင်းသား ပါတီများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော မဟာမိတ်အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ ဖယ်ဒရယ်အခြေပြု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေသစ် ရေးဆွဲခြင်းကို UNFC နှင့် UNA တို့က ဦးဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူငယ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူထုအကျိုးပြု အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်သည့် မူကြမ်းရေးဆွဲရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပြီး လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ပြီး ဖက်ဒရယ်အခြေပြု ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မူကြမ်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်အတူ
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံအပြီး ၂၅နှစ်အကြာ
By kyawswaraung 2951 days ago on နိုင်ငံရေး from www.7daynewsjournal.com
၈၈ တွင် လူထုကမကြိုက်သော တစ်ပါတီအာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြုတ်ချခဲ့သည်မှာလည်း မှန်ကန်ပြီး နိုင်ငံတော်ပြိုကွဲမည့် အန္တရာယ်ကို ကာကွယ်သည်မှာလည်း မှန်ကန်ပါသည်ဟု ယနေ့သဘောထားတင်းမာသူဟု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားများက သတ်မှတ်ထားကြသည့် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးအောင်သောင်းက ပြောကြားသည်။
“စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းတဲ့ နည်းအပြင် အခြားနည်းရှိသလားဆိုရင် အာဏာမသိမ်းလို့မရအောင် လုပ်ခဲ့တယ်။ အကွက်ဆင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့” အရေးတော်ပုံကာလတွင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်သည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ၀င်းထိန်ကလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
By mohmohkhin 2951 days ago on နိုင်ငံရေး from www.shwemyotaw.com
By mohmohkhin 2951 days ago on နိုင်ငံရေး from www.news-eleven.com
By cherrythet 2956 days ago on နိုင်ငံရေး from www.rfa.org
By cherrythet 2956 days ago on နိုင်ငံရေး from www.first-11.com
ကယားလူမျိုးစု ဒီမိုကရေစီ ပါတီမှ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်မည်
By jasmineaye 2955 days ago on နိုင်ငံရေး from www.first-11.com
ထိုကဲ့သို့ သင်တန်းပြုလုပ်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုင်းနိုင်နိုင်ထွေးက "ကျွန်တော်တို့ ကျေးရွာက ခေါင်းဆောင်တွေကို အဓိကထား တက်ရောက်စေချင်ပါတယ်။ ပါတီဝင်တွေသာမက ဒေသတွင်းကအားလုံး ပါစေချင်လို့ ပြုလုပ်တာပါ။ လူတိုင်းနိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေကို နားလည်စေချင်လို့ပါ။ သင်တန်းမှာ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ပြီး အဖြေထွက်စေ ချင်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား ဒေသနဲ့ တိုင်းရင်းသား အရေးကို ဒေသတွင်းကလူတွေ ပိုမိုသိဖို့နဲ့ နိုင်ငံရေး အသိအမြင် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်" ဟုဆိုသည်။အင်န်ဂျီအို အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုဖြစ်သည့် The Innovation မှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေး သင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအား လေ့လာခြင်း၊ နိုင်ငံရေးအရ ပြည
မြန်မာနိုင်ငံသည် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ရန် လိုအပ်ဟု အထက်လွှတ်တော်အမတ် မစ်ခ်ျမက်ကော်နယ်ပြော
By eieilwin98 2957 days ago on နိုင်ငံရေး from news.yatanarpon.com.mm
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တပ်မတော်ကို အရပ်သား ထိန်းချုပ်မှု အောက်တွင် ထားရှိရန် အပါအဝင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ အချက်အချို့ ပြင်ဆင်ရေးနှင့် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ကိစ္စများကို ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်း၊ မြန်မာပြည်သူများ အနေဖြင့် မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သူကို ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ရွေးချယ်ခွင့်ပေးရန် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လက်ရှိ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေတွင် သမ္မတဖြစ်ရန် အတွက် လိုအပ်သည့် ကန့်သတ်ချက်သည် အလွန် ကျဉ်းမြောင်းပြီး အဓိပ္ပာယ် ကင်းမဲ့နေကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်တစ်ဆင့် တက်ချင်သည်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ပိုပြီးရင်းနှီးစွာ ဆက်ဆံချင်သည်
လက်ပံတောင်း ဒေသ ထပ်မံ အကြမ်းဖက်ခံရ
By aungaung 2964 days ago on နိုင်ငံရေး from burma.irrawaddy.org
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း ဒေသရှိ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ထားသော ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ဇီးတော ကျေးရွာ သို့ ယနေ့ နံနက် ၂ နာရီခန့်က လုံထိန်း ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ၀င်ရောက် စီးနင်း၍ ရှာဖွေ ဖမ်းဆီးမှုများ ပြုလုပ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။“မနက် ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်လောက်က ယူနီဖောင်းဝတ် ရဲတွေက လုံထိန်း ကား ၂ စီး၊ ဆိုင်ကယ် ၁၀ စီးနဲ့ ဇီးတော ကျေးရွာကို ၀င်စီးတာ”ဟု ဒေသခံများကို ကူညီပေးနေသော လက်ပံတောင်း ဒေသရှိ ရန်ကုန် ပြည်သူ့အကျိုးဆောင် ကွန်ရက်မှ ကိုထက် က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
မလေးရှား၌ မြန်မာနိုင်ငံသား တဦး ထပ်မံ တိုက်ခိုက်ခံရပြီး သေဆုံး
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ မြန်မာနိုင်ငံသားများ လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိသေးသည့်အပြင် ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းတွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံသား တဦး ထပ်မံ တိုက်ခိုက်ခံရ၍ သေဆုံးသွားကြောင်း သိရသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလမ်ပူမြို့ ဆာလာရမ်း (Sealyang) အရပ်တွင် နေထိုင်သည့် အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်ရှိ ကို သန်းသန်း ဆိုသော လူငယ်တဦးသည် ၎င်း၏ သူငယ်ချင်းအိမ်သို့ သြဂုတ်လ ၃ ရက်နေ့ ညနေက သွားလည်စဉ် အမည်မသိ လူ ၃ ဦးက ဓားဖြင့် ထိုး၍ သေဆုံးသွားရကြောင်း ကပုန်းနာရေး ကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ကိုဆန်းဝင်း က ဧရာဝတီ ကို ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ဆာလာရမ်း အရပ်အပါအ၀င် နေရာတချို့၌ လုံခြုံမှု လုံးဝ မရှိသေးကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသား များ အား တိုက်ခိုက်သ